China Volar uvala Plate mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
Ipleyiti yokutshixa iVolar
—Uhlobo lwentloko yesonka
Ukufakelwa komothuko kwipleyiti yokutshixa ivolar yinkqubo ebanzi yesingxobo sokujongana neendlela ezahlukeneyo zokwahlukana. Ngamacwecwe amile ngokwenyama aneenkxaso ezime-engile kunye nemingxunya ye-combi, unyango lwe-dorsal kunye ne-volar distal radius fractures ziyafezekiswa.
Ukufakwa kwepleyiti yokutshixa ivolar kulungele irediyasi ye-volar, nakuphi na ukwenzakala okubangela ukukhula kubanjelwe kwi-distal radius.
Isetyenziselwa i-.03.0 ye-orthopedic locking screw, i-.03.0 ye-orthopedic cortex screw, ehambelana ne-3.0 uthotho lwezixhobo zotyando.
Ekhohlo iiHole 3
Ekunene iiHole ezi-3
Amacwecwe okutshixa i-Volar kunyango lwee-distal fractures eziqhekekileyo kunye okanye ngaphandle kwethambo elongezelelekileyo azichaphazeli iziphumo ze-radiographic. Kwimiqhekeza eguqukayo, ukongezwa kwethambo okungafunekiyo akuyomfuneko ukuba ukunciphisa kwe-intraoperative anatomical kunye nokulungiswa kwenziwa xa kunokwenzeka.
Ukusetyenziswa kwamacwecwe okutshixa ivolar kulungiso lotyando lweziqhekezo zeradiyo ekude kuye kwathandwa. Nangona kunjalo, iingxaki ezininzi ezinxulumene nolu hlobo lotyando zixeliwe, kubandakanya ukuphuka kwetoni. Ukuqhekeka kwe-flexor pollicis longus tendon kunye ne-extensor pollicis longus tendon enxulunyaniswa nokulungiswa kwethala le-distal fractures ngeplate enjalo yaxelwa okokuqala kwi-19981 kunye ne-2000,2 ngokwahlukeneyo. Isiganeko esichaziweyo sokuqhekeka kwe-flexic pollicis longus tendon enxulunyaniswa nokusetyenziswa kwepleyiti yokutshixa ivolar yokuqhekeka kwe-radius esekude isusela kwi-0.3% ukuya kwi-12% .3,4 Ukunciphisa ukwenzeka kwe-flexor pollicis longus tendon rupture emva kokulungiswa kwepleyiti ye-distal ukwaphuka kwemitha, ababhali bahoye ukubekwa kweplate. Kuluhlu lwezigulana ezinendawo eziqhekezayo zeradiyo, ababhali baphande imeko yonyaka kwinani leengxaki ezinxulumene neendlela zonyango. Uphononongo lwangoku luphande imeko yeengxaki emva kotyando ngenxa yokuqhekeka kwe-radial distal ngeplate yokutshixa ipleyiti.
Kwakukho inqanaba lokuxakaniseka kwe-7% kuthotho lwangoku lwezigulana ezinerafal radius fractures ezanyangwa ngokulungiswa kotyando ngepleyiti yokutshixa ivolar. Iingxaki zibandakanya i-carpal tunnel syndrome, i-peripheral nerve palsy, i-trigger digit, kunye ne-tendon rupture. Umgca wokugcina amanzi luphawu olusetyenziswayo lokubeka ipleyiti yokutshixa ivolar. Akukho matyala e-flexor pollicis longus tendon rupture eyenzekayo phakathi kwezigulana ezingama-694 ngenxa yokuba kwaqwalaselwa ngononophelo kubudlelwane phakathi kokufakwa kunye nethenda.
Iziphumo zethu zixhasa ukuba iipleyiti zokutshixa i-volar engile yonyango olusebenzayo lwezinto ezingazinzanga ezaphukileyo zeradiyo, ezivumela ukulungiswa kwangaphambi kokusebenza kwangaphambili ukuba kuqaliswe ngokukhuselekileyo.
Egqithileyo Icwecwe lokuTshixa iVolar Dorsal
Okulandelayo: Iplate yokuTshixa kweVolar ekude
3.0 4.0 5.0 Isitshixo sokutshixa
Iposta yePedomedial Tibia Plateau yokuVala iPlate
Iplate yokuVala yangasemva kweTibia